Faq 2014 myanmar census by Tun Ba Kyu 336 views
Poetry slam by sjpeagles 259 views
The Ultimate Guard Monitoring Solution by johnthompson57 221 views
Pre-Owned 2009 Chevrolet Impala LT by Hennessy Ford Stores 124 views
Wikanda Flyer by David Wikanda 252 views
Incomplete online marketing tips by Tun Ba Kyu 109 views
, Deputy General Manager at APEX Gourmet Co.,Ltd
This isasample form for Myanmar 2014 Census.
1. 12345678(90)0123012123 41234567 8910 123 4123 41234567 85678910 11 1 21212312345 123 4123456123 41234567 8910 11 1 21212312345 123 4123456123 41234567 8910 11 1 21212312345 123 4123456123 41234567 8910 11 1 21212312345 123 4123456123 41234567 8910 11 1 21212312345 123 4123456123 41234567 8910 11 1 21212312345 123 4123456123 41234567 8910 11 1 21212312345 123 4123456123 41234567777777778910 11 1 21212312345 123 41234560 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 89120 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 89၃။၃။ အိမ်အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့်ထာင်ဦးစီးနှင့်ေတာ်စပ်ပုံုံတာ်စပ်ပုံုံ၂။၂။ အမညအမည် ၂၉-၃-၂၀၁၄ ရက်ညတွင် ဤအိမ်ေထာင်စု၌ ညအိပ်သူ အားလုံးကိုေမးရန်။ (ေမွးစကေလး၊ သက်ကီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း သူများနှင့်ဧည့်သည် များအပါအဝင်) အမှတ်စဥ်အမှတ်စဥ် ၁။၁။ အိမ်ေထာင်ဦးစီး ဇနီး/ခင်ပွန်း သား/သမီး သမက်/ေချွးမ ေြမး/ြမစ် မိဘ/ေယာက္ခမ ေမာင်နှမ အဘိုး/အဘွား ေဆွမိျုး ေမွးစားသား/သမီး ေဆွမျိုးမေတာ်စပ်သူ လူ တိုင်း ကို ေမး ရန်လူ တိုင်း ကို ေမး ရန် ကျား မ ၄။၄။ ကျား/မကျား/မ ပြ ည်ေထာင်စုသမေထာင်စုသမ္မတြမန်မာြမန်မာနိုင်ငံေတာ််ိုင်ငံေတာ်် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးေရနှင့်အိမ်အေြကာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်းကာင်းအရာသန်းေခါင်စာရင်း လိျှု့ဝှက်ဝှက် သန်းသန်းေခါင်စာရင်းခါင်စာရင်းေကာက်ယူသည့်အချက်အလက်များကို သန်းကာက်ယူသည့်အချက်အလက်များကို သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ကိစခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စမှတစ်ပါး အမှတစ်ပါး အြခားမည်သည့်ကိစခားမည်သည့်ကိစ္စ အတွက်မျှအသုံးအတွက်မျှအသုံးြပုြခင်းြခင်း (သို(သို့မဟုတ်) စစ်မဟုတ်) စစ်ေဆးဆးြခင်းခင်းမ ြပမ ြပုရ။ရ။ ၅။၅။ ြပည့်ြပည့်ြပီးပီး အသက်အသက် "၉၈" နှစ်နှင့် အထက်ြဖစ် က "၉၈" ေရးပါ။ "၁" နှစ် ေအာက် ဖြ စ်က ''၀၀'' ေရးပါ။ (နှစ်) လူဝင်မလူဝင်မှုကီးီးြကပ်ကပ်ေရးနှငးနှင့်ြပည်သ့်ြပည်သ့ူအင်အားဝန်အင်အားဝန်ကီီးဌာနကီီးဌာန အပိျု/လူပိျု အိမ်ေထာင်ရှိ မုဆိုးဖို/မုဆိုးမ ကွဲကွာ သာသနာဝင် အိမ်အိမ်ေထာင်စု၏ တည်ထာင်စု၏ တည်ေနရာပြ အနရာပြ အေြကာင်းအရာများကာင်းအရာများ အိမ်အိမ်ေထာင်စု အမှတ်ထာင်စု အမှတ်စာရင်းစာရင်း ေကာက်ကွက် အမှတ်ကာက်ကွက် အမှတ်ရပ်ကွက်/ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စုကျးရွာအုပ်စုြမို့နယ်ယ်/ြမို့နယ်ခွဲယ်ခွဲခရိုင်ခရိုင်တိုင်းေဒသတိုင်းေဒသ ကီး/ြပည်ကီး/ြပည်နယ်နယ် ြမိမို့ /ေကျးလက််ေကျးလက်် ြမို့ ေကျးလက် ၇။၇။ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ၈။၈။ လူမျိလူမျိုးး (လူမျုိးသေကင်္တကို ြကည့်၍ဖြ ည့်သွင်းပါ။) ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ နတ် အြခားဘာသာ ဘာသာမရှိသူများ ၆။၆။ အိမ်အိမ်ေထာင်ထာင်ေရးရး အေခြ အခြ အေန ေမးခွန်းပုံစံ အမှတ်စဥ်မးခွန်းပုံစံ အမှတ်စဥ် ဤအိမ်ေထာင်စုအတွက် ေမးခွန်းပုံစံ စုစုေပါင်းဤအိမ်ေထာင်စုအတွက် ေမးခွန်းပုံစံ စုစုေပါင်း အြမင် အြကား လမ်းေလျှာက်/ အြမင့်တက်/ ပစ္စည်းကိုင် တွယ်ရာတွင် သင်ယူေလ့ လာြခင်း/ မှတ်ဉာဏ်/ အာရုုံစူးစိုက်ြခင်း မသန်စွမ်းမသန်စွမ်းမှုအေြခေြခအေန ေမးခွန်းပုံစံမးခွန်းပုံစံြဖည့်သွင်းရန်ညွှနဖည့်သွင်းရန်ညွှနြ်ကားချက််ကားချက် 2B ခဲတံအနက်ကိုသာ အသုံးပြ2B ခဲတံအနက်ကိုသာ အသုံးပြ ု၍၍ ေပးထားပးထားေသာ နမူနာပုံစံအတိုင်းသာ နမူနာပုံစံအတိုင်းြဖည့်သွင်းဖည့်သွင်းေရးြးြခယ်ပါ။ခယ်ပါ။ ဂဏန်းသဂဏန်းသေကင်္တများတများြဖည့်သွင်းရာတွင်ဖည့်သွင်းရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်းအာက်ပါအတိုင်း ေရးသွင်းပါ။ရးသွင်းပါ။ ၉။၉။ (အမည်) သည်(အမည်) သည် ေအာက်အာက်ေဖာ်ြပေဖာ်ြပပါ ..ပါ ..…..အခက်အခဲ..အခက်အခဲ ရှိပါသလား။ရှိပါသလား။ မခက်ခဲပါ-၁မခက်ခဲပါ-၁ အနည်းငယ်ခက်ခဲ-၂အနည်းငယ်ခက်ခဲ-၂ အများအများကီးခက်ခဲ-၃ လုံးဝမေကာင်းပါ-၄ကီးခက်ခဲ-၃ လုံးဝမေကာင်းပါ-၄ အိမ်အိမ်ေထာင်စုထာင်စုေမးခွန်းပုံစံမးခွန်းပုံစံ ©DRSDataServicesLimited/O03120813/ASDZ ြ
2. 12345678(90) 1234567 8 1231 1 1 1 1 1 1 1222222223333333344444444555555556666666677777777 1 1 1 1 1 1 1 1222222223333333344444444555555556666666677777777 8 8 8 8 8 8 8 899999999 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1222222223333333344444444555555556666666677777777 8 8 8 8 8 8 8 899999999 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 123121212121212121212121212121212121212121212121212123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 1 2121 2121 2121 2121 2121 2121 2121 212အမှတ်စဥအမှတ်စဥ် ၁၁။၁၁။ ဒီမှာဒီမှာေမွးပါကမွးပါက "၀၀၀""၀၀၀" ေရးပါ။ရးပါ။ ဒီမှာဒီမှာေမွးသူမွးသူ မဟုတ်ကမဟုတ်က ေမွးဖွားသည့်ေမွးဖွားသည့်ြမို့နယ်နယ် သေကင်္¶တကိုတကို ေရးပါ။ရးပါ။ ၁၂။၁၂။ ြမို့- ၁- ၁ ေကျးေကျး လက်- ၂လက်- ၂ ေကျာင်းတက်ေနသူ ေကျာင်းတက်ဘူးသူ လုံးဝေကျာင်းမေနဘူးသူ အလုပ်ေြကာင့်/အလုပ်ရှာရန် ပညာေရးေြကာင့် အိမ်ေထာင်ကျ၍ မိသားစုေနာက်လိုက်၍ ပဋိပက္ခများ၊တိုက်ပွဲများေြကာင့် ဘယ်မှမေြပာင်းေရွှ့ပါ အြခား ၂၀။၂၀။ (အမည်)(အမည်) သည်သည် ေကျာင်ကျာင်းတက်တက် ေနသူ(သိုေနသူ(သို့) ေကျာင်းတက်ေကျာင်းတက် ဘူးသူ။ဘူးသူ။(သို(သို့) လုံးဝလုံးဝေကျာင်းမကျာင်းမ ေနဘူးသူ။နဘူးသူ။ ဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါသလား။ ၁၆။၁၆။ ေနမနမြ ဲဲအရပ်သိုအရပ်သို့ ဘာဘာေြကာင့်ကာင့် ေပြ ာင်းပြ ာင်းေရေရွှ့ လာရပါသလဲ။လာရပါသလဲ။ ၂၁။၂၁။ အအြမင့်ြမင့်ဆုံး တက်ဆုံး တက်ေရာက်ရာက် ပြ ီးီးစီးခဲ့သည့် အတန်းကို ေရးပါ။စီးခဲ့သည့် အတန်းကို ေရးပါ။ ၁၅။၁၅။ ေနမနမြ ဲအရပ်အရပ် မှာမှာေနသည်နသည် မှာ ဘယ်မှာ ဘယ် နှစ်ှစ်နှစ်ရှိှစ်ရှိ ြပီပီလဲ။လဲ။ (၁)(၁) နှစ်ှစ် ေအာက််ေအာက််ြဖစ်ြဖစ် က "၀၀"က "၀၀" ေရးသွင်းပါ။ေရးသွင်းပါ။ လူ တိုင်း ကို ေမး ရန်လူ တိုင်း ကို ေမး ရန် ေပြ ာင်းေပြ ာင်းေရေရွှ့သွားလာသွားလာြခြခင်းအင်းအေြကာင်းအရာကာင်းအရာ ပညာပညာေရးအရးအေြကာင်းအရာကာင်းအရာ အလုပ်အကိုင်အမျိအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားးအစားေမွးဖွားရာဇာတိေမွးဖွားရာဇာတိ ြမို့ ေကျးလက် ၁၄။၁၄။ ြမို့- ၁- ၁ ေကျးေကျး လက်- ၂လက်- ၂ ြမို့ ေကျးလက် အသက် (၅)အသက် (၅) နှစ်ှစ်နှင့်အထက်ှင့်အထက် ေမးရန်မးရန် အသက် (၁၀)အသက် (၁၀) နှစ်ှစ်နှင့်ှင့်အထက်အထက် ေမးရန်ေမးရန် ၁၃။၁၃။ ဒီမှာဒီမှာေနပါက "၀၀၀"နပါက "၀၀၀" ေရးပါ။ရးပါ။ မေနပါကမေနပါက ြမို့နယ်ယ် (ေနမနမြ ဲအရပအရပ်)်) သေကင်္တ ကိုတ ကို ေရးပါ။ေရးပါ။ ၁၈။၁၈။ ြမို့- ၁- ၁ ေကျးေကျး လက်-၂လက်-၂ ြမို့ ေကျးလက် ေနမနမြ ဲအရပ်သိအရပ်သိ့ုေုေြပြပာင်းမလာခင်ာင်းမလာခင် ေနာက်ဆုံးနာက်ဆုံးေနခဲ့သည့်နခဲ့သည့်ေဒေဒသ ၁၇။၁၇။ ေနမြ ဲဲအရပ်တွင်အရပ်တွင် ေနပါက "၀၀၀" ေရးပါ။နပါက "၀၀၀" ေရးပါ။ ေနမြ ဲဲအရပ်တွင်အရပ်တွင်ေနသနသူ မဟုတ်ကမဟုတ်ကြမိမို့နယ်နယ် သေကင်္¶တကိုတကိုေရးပါ။ရးပါ။ ၁၉။၁၉။ (အမည်)(အမည်) သည် ဘာသာသည် ဘာသာ တစ်ခုခုတစ်ခုခုြဖင့်ြဖင့် ေရးတတ်ရးတတ် ဖတ်တတ်ပဖတ်တတ်ပါ သလား။သလား။ တတ် မတတ် အစိုးရဝန်ထမ်း အလုပ်သမား(ပုဂ္ဂလိက/အဖွဲ့အစည်း) အလုပ်ရှင် ကိုယ်တိုင်လုပ် မိသားစုလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်သူ အလုပ်ရှာဆဲ အလုပ်မရှာခဲ့ပါ အချိန်ြပည့်ေကျာင်းတက်ေသာေကျာင်းသား အိမ်မှုကိစ္စလုပ် အြငိမ်းစား၊သက်ကီးရွယ်အို ဖျားနာသူ၊မသန်စွမ်းသူ အခြား ၂၂။၂၂။ လွန်ခဲ့လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ အတွင်းသာ (၁၂) လ အတွင်း သင်မည်သည့် အလုပ်သင်မည်သည့် အလုပ်အကိုင်မျိအကိုင်မျိုးး လုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ (၂၀၁၃ ဧပလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။ (၂၀၁၃ ဧပြ ီလ မှ ၂၀၁၄ီလ မှ ၂၀၁၄ မတ်လအတွင်း)။ သေကမတ်လအတွင်း)။ သေကင်္¶တ (၆) မှ(၁၁)တ (၆) မှ(၁၁) အထိ ေြဖဆိုခဲ့လအထိ ေြဖဆိုခဲ့လျှင် ဇယားတိုင်(၂၅) ကိုင် ဇယားတိုင်(၂၅) ကို ဆက်ေမးရန်။ဆက်ေမးရန်။ ေနမနမြ ဲအရပ်အရပ် လုပ်သားအင်အားအလုပ်သားအင်အားအေကြ ာင်းအရာာင်းအရာ ၁၀။၁၀။ ကိုင်ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ်ဆာင်သည့်လက်မှတ် အမျိအမျိုးအစားးအစား နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(ပန်းေရာင်) ဧည့်နိုင်ငံသားကတ်(အပြာေရာင်) နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူကတ်(အစိမ်းေရာင်) အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်(သုံးေခါက်ချိုး -ကျား-စိမ်း၊မ-ပန်းေရာင်) သာသနာဝင်ကတ် ယာယီသက်ေသခံကတ်(အဖြူ) နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နိုင်ငံြခားသားနုိင်ငံကူးလက်မှတ်(ပတ်စ်ပို့) မည်သည့်ကတ်ပြားမှမကိုင်ေဆာင်သူ အသက်(၁၀)နှစ်ေအာက်ကေလး ကိုင်ေဆာင်သည့်လက်မှတ် အတန်းမရှိ - 00 01 11 တကသိုလ်/ေကာလိပ် - 12 အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသင်တန်း - 13 ဒီပလိုမာ (ဘွဲ့မရ) - 14 ဘွဲ့ရ - 15 ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ - 16 မဟာဘွဲ့ - 17 ပါရဂူဘွဲ့ - 18 အြခား - 19 အတန်း (Grade) ္က ©DRSDataServicesLimited/O03130813/IFQO
3. 1234567 8 121212121212121212121212121212121234567 8910 1234561234567 891234567 8910 1234567 891234567 8 1234567 1234567 123456722222221 1 1 1 1 1 1222222 1 1 1 1 1 1 123456အမှတ်စဥ်အမှတ်စဥ် ကျား ၂၃။၂၃။ လွန်ခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတွင်း (အမည်) လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အဓိက အလုပ်အကိုင်ကို အေသးစိတ်ေဖာ်ြပပါ။ (ဥပမာ-မူလတန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ၊ လယ်သမား (စပါးစိုက်)၊ အထည်ချုပ် အလုပ်သမား၊ အငှားယာဉ်ေမာင်း၊ အစရှိသြဖင့်) ေရးသားပါ။ ၂၄။၂၄။ (အမည်)သည်လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လ အတွင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်း၊ အဖွ့ဲ အစည်း၏ အမည်ကို အေသးစိတ် ေဖာ်ြပပါ။ (ဥပမာ- ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၊ အထည် ချုပ်လုပ်ငန်း အစရှိ သြဖင့်ေရးသားပါ။) အလုပ်အကိုင် လုပ်ငန်း လုပ်သားအင်အားအေလုပ်သားအင်အားအေြကာင်းအရာကာင်းအရာ အသက် (၁၀)အသက် (၁၀) နှစ်ှစ်နှင့်အထက်ှင့်အထက် ေမးရန်ေမးရန် ၂၅။၂၅။ သင့်ဘဝတစ်သင့်ဘဝတစ်ေလျှာက်ာက် အရှင် ေအရှင် ေမွးဖွားခဲ့မွးဖွားခဲ့ေသာကသာကေလးလး အေရ အတွက်အေရ အတွက်ေဖာ်ဖာ်ြပြပပါ။ပါ။ (က(ကေလး မလး မေမွးဘူးပါက '၀၀'မွးဘူးပါက '၀၀' ေရးသွင်းပါ။)ရးသွင်းပါ။) ၂၆။၂၆။ သင်သင်ေမွးဖွားမွးဖွားြပီးပီး သင်သင်နှင့်အတူှင့်အတူေနန ကေလးအလးအေရအတွက်ရအတွက် ကိုကိုေဖာ်ဖာ်ြပြပပါ၊ပါ၊ ၂၇။၂၇။ သင်သင်ေမွးဖွာမွးဖွားြပီးပီး သင်သင်နှင့်အတူမေနဘဲှင့်အတူမေနဘဲ အြခားတွင်ေနေသာအြခားတွင်ေနေသာ ကေလးအေရအတွက်ကေလးအေရအတွက် ကိုေဖာ်ြပပါ။ကိုေဖာ်ြပပါ။ ၂၈။၂၈။ ေမွးဖွားမွးဖွားြပီးမှီးမှ ေသဆုံးသွားသဆုံးသွားေသာသာ ကေလးအလးအေရအတွက်ရအတွက် ကိုကို ေဖာ်ဖာ်ြပပြပပါ။ါ။ မ မ မ အိမ်အိမ်ေထာင်ကျဘူးသူအမျိထာင်ကျဘူးသူအမျိုးသမီး အသက် (၁၅းသမီး အသက် (၁၅ နှစ်ှစ်နှင့်အထက်)ှင့်အထက်) ေမးရန်မးရန် ကျား ကျား လ နှစ်ကျား မ ရှိ ၂၉။၂၉။ ေနာက်ဆုံးအရှင်ေနာက်ဆုံးအရှင်ေမွးမွးကကေလး၏လး၏ ေမွးသကရာဇ်ကိုမွးသကရာဇ်ကိုေရးပါ။ရးပါ။္က ၃၁။၃၁။ ဤဤ ကေလးလး အသက်အသက် ရှင်လျက်ရှင်လျက် ရှိပါသရှိပါသ လား။လား။ မရှိ ကျား ၃၀။၃၀။ ေနာကေနာက်ဆုံးဆုံး အရှင်အရှင်ေမွးမွး ကေလးလး သည်သည် ကျား လား၊ကျား လား၊ မ လား။မ လား။ မ အရှင်အရှင်ေမွးကမွးကေလး အလး အေရအတွက်ရအတွက် ေနာက်ဆုံးအရှင်ာက်ဆုံးအရှင်ေမွးကမွးကေလးအလးအေြကာင်းအရာကာင်းအရာ အိမ်အအိမ်အေြကာင်းအရာကာင်းအရာ လျှပ်စစ်မီး ဓာတ်ေငွ့ ေရနံဆီမီး ဘိုင်အိုဂတ်စ် သစ်သား/ထင်း မီးေသွး/ေလာင်စာေတာင့် ေကျာက်မီးေသွး ေကာက်ရုိး/ြမက်ေြခာက် အြခား ေရဆွဲအိမ်သာ ေရေလာင်း/ ယင်လုံအိမ်သာ တွင်း/ဇလားအိမ်သာ တွင်းမရှိအိမ်သာ အြခား အိမ်သာမရှိ ဓနိ/သက်ကယ်/အင်ဖက် ဝါး ေြမကီး သစ်သား သွပ် အုတ်ကပ်/အုတ်/ကွန်ကရစ် အြခား ေရဒီယို ရုပ်ြမင်သံြကား ကိုးဖုန်း လက်ကိုင်ဖုန်း ကွန်ပျူတာ အိမ်တွင် အင်တာနက် တပ်ဆင်ထားြခင်း ကား/ပစ်ကပ်/ ထရပ်ကား/ဗင်န် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်/ လျှပ်စစ်စက်ဘီး/ သုံးဘီးကား စက်ဘီး (၄)ဘီးပါ ေထာ်လာဂျီ ကနူးေလှ၊ သမ္ဗာန် စက်ေလှ၊ ေမာ်ေတာ်ဘုတ် လှည်း(ကဲျွ၊ နွား၊ ြမင်း... စသြဖင့်) ကွန်ဒိုမီနီယမ် တိုက်ခန်းတွဲ/တိုက်ခန်း ဘန်ဂလို/ တိုက်အိမ် တိုက်ခံအိမ် ပျဥ်ေထာင်အိမ်/ သစ်သားအိမ် ဝါးအိမ် ၂-၃ နှစ်ခံတဲအိမ် ၁ နှစ်ခံတဲအိမ် အြခား ေရပိုက်လိုင်း အ၀ီစိတွင်း ေရတွင်း (အုတ်စီ) ေရတွင်း(အကာရံမဲ့) ေရကန် ြမစ်/ေချာင်း/တူးေြမာင်း ေတာင်ကျေရ/မိုးေရ ေရသန့်စက်/ ေရသန့်ဘူး ေရကား အြခား လျှပ်စစ်မီး ေရနံဆီမီး ဖေယာင်းတိုင်မီး ဘကရီမီး မီးစက် (ပုဂ္ဂလိက) ေရအားလျှပ်စစ် (ပုဂ္ဂလိက) အြခား ပိုင်ရှင် အိမ်ငှား အစိုးရဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အြခား ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံး (ဆိုလာြပား) အခမဲ့ (မိဘ/ေယာက္ခမ/ ေဆွမိျုး/မိတ်ေဆွ) ၃၄။ သင့်အိမ်၃၄။ သင့်အိမ်ေထာင်စုတွင်ထာင်စုတွင် အလင်းအလင်းေရာင်အတွက်ရာင်အတွက် အဓိကမည်သည့် မီးအမျိအဓိကမည်သည့် မီးအမျိုး အစားကိုအသုံးအစားကိုအသုံးြပြပုပါသလဲ။ါသလဲ။ ၃၃။ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မ၃၃။ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိမျိုးအ စားးအ စား ၃၂၃၂။ အိမ်။ အိမ်ေထာင်စု၏ထာင်စု၏ ေနအိမ် အမျိနအိမ် အမျိုးအစားးအစား ၃၅။ သင့်အိမ်၃၅။ သင့်အိမ်ေထာင်စုအတွက်ထာင်စုအတွက် ေသာက်ေသာက်/ သုံးေရကို မည်သည်မှ အဓိကရရှိပါသလဲ။သုံးေရကို မည်သည်မှ အဓိကရရှိပါသလဲ။ ၃၆။ အစားအစာချက်၃၆။ အစားအစာချက်ြပုတ်စားတ်စား ေသာက်ရန်အတွက် မည်သည့်သာက်ရန်အတွက် မည်သည့် ေလာင်စာကိုလာင်စာကို အဓိကအဓိက အသုံးအသုံးြပြပုပါသလဲ။ပါသလဲ။ ၃၇။ အိမ်၃၇။ အိမ်ေထာင်စုတွင်ထာင်စုတွင် မည်သည်မည်သည့်အိမ်သာမျိအိမ်သာမျိုးကိုးကို အသုံးအသုံးြပုပါသလဲ။ပါသလဲ။ ၃၉။ သင့်အိမ်၃၉။ သင့်အိမ်ေထာင်စုတွင်ထာင်စုတွင် ေအာက်ပါပစအာက်ပါပစ္စည်းများရှိပါသလား။ည်းများရှိပါသလား။၃၈။၃၈။ ေနအိမ်အနအိမ်အေဆာက်အအုံတွင်ဆာက်အအုံတွင် အဓိကအသုံးအဓိကအသုံးြပုသည့် ပစသည့် ပစ္စည်းများကိုည်းများကို စာရင်းေကာက်မှစာရင်းေကာက်မှ ြကည့်၍ကည့်၍ ြဖည့်ပါ။ဖည့်ပါ။သုံးေရေသာက်ေရ အခင်းအကာအမိုး ရှိ မရှိ ရှိ မရှိ ©DRSDataServicesLimited/O03140813/RLCJ
4. 1212121212121 21 12345612342345678910 11 212345678910 11 212345678910 11 21 1 1 1 12345678923456789212345678910 11 1234567 89212345678910 11 1234567 8923456789234567892345678 910 1121212121212121212121212121212121212120 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 890 1234567 89လက်မှတ် လက်မှတ် ဤအိမ်ဤအိမ်ေထာင်စုရှိ လူဦးထာင်စုရှိ လူဦးေရစုစုရစုစုေပါင်းပါင်း ကျား မ စုစုေပါင်း ကျား မ ကျား မ ကျား မ ကျား မ ကျား မ ေသဆုံးစဥ်အသက်ေသဆုံးစဥ်အသက် ေသဆုံးသူ၏ြပည့်ြပီးအသက်ကို ေရးပါ။ အသက်ကို မသိပါက နီးစပ်ရာ ေမးြမန်း၍လည်းေကာင်း၊ ရိုးရာြပက္ခဒိန် အသုံုးြပု၍လည်းေကာင်း ခန့်မှန်းတွက်ချက် ြဖည့်သွင်းပါ။ ၄၁။ လွန်ခဲ့၄၁။ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်သာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်ေထာင်စုသားများမှထာင်စုသားများမှ ေသဆုံးသူအသဆုံးသူအေရအတွက် (၃၀-၃-၂၀၁ရအတွက် (၃၀-၃-၂၀၁၃ မှ ၂၉-၃-၂၀၁မှ ၂၉-၃-၂၀၁၄ ထိ)ထိ) ေသဆုံးသူသည် အမျိသဆုံးသူသည် အမျိုးသမီး အသက် ၁၅-၄၉းသမီး အသက် ၁၅-၄၉ နှစ်အတွင်းှစ်အတွင်းြဖစ်ပါကဖစ်ပါက −−−−−−−−− ေသဆုံးြခင်းဖြ စ်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန် ေဆာင်စဥ် ေမွးဖွားစဥ် ကေလးေမွးြပီး ပထမ (၆) ပတ်အတွင်း ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် ဟုတ် မဟုတ် လွန်ခဲ့လွန်ခဲ့ေသာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်သာ (၁၂) လအတွင်း အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှထာင်စုသားများထဲမှ ေသဆုံးမသဆုံးမှုအေြခေြခအေန အိမ်အိမ်ေထာင်စုသားများထဲမှထာင်စုသားများထဲမှ နိုင်ငံိုင်ငံြခြခားသိုားသို့ေရာက်ရှိရာက်ရှိေနသူများစာရင်းနသူများစာရင်း ေသဆုံးသူသည်ေသဆုံးသူသည် ေယာက်ျားလားေယာက်ျားလား၊ မိန်းမလား။မိန်းမလား။ အမည်အမည် ဦး ဦး ြပည့်ည့်ြပီးပီး အသက်အသက် ြမန်မာြမန်မာနိုင်ငံမှိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားသည့်ခုထွက်ခွာသွားသည့်ခုနှစ်ှစ် ကျား/မကျား/မ ေရာက်ရှိေရာက်ရှိေနထိုင်သည့်နထိုင်သည့်နိုင်ငံိုင်ငံအိမ်အိမ်ေထာင်ဦးစီးထာင်ဦးစီးနှင့်ှင့် ေတာ်စပ်ပုံတာ်စပ်ပုံအမည်အမည်စဥ်စဥ် ၄၀၄၀။ အိမ်အိမ်ေထာင်စုသားများထဲထာင်စုသားများထဲမှမှ နုိုိင်ငံင်ငံြခားသိုခားသို့ေရာက်ရှိရာက်ရှိေနသူ အနသူ အေရအတွက်ရအတွက် စဥ်စဥ် စာရင်းစာရင်းေကာက်ကာက် ရက်စွဲ စာရင်းစစ်စာရင်းစစ် ေမးခွန်းပုံစံတစ်ခုထက်ပိုသုံးပါကမးခွန်းပုံစံတစ်ခုထက်ပိုသုံးပါက ဤအိမ်ဤအိမ်ေထာင်စုရှိ လူဦးထာင်စုရှိ လူဦးေရစုစုရစုစုေပါင်းပါင်း အေရအတွက်ကိုပထမရအတွက်ကိုပထမေမးခွန်းပုံစံတွင်သာမးခွန်းပုံစံတွင်သာ ြဖြဖည့်သွင်းပါ။ည့်သွင်းပါ။ ရက်စွဲ အမည် အမည် ထိုင်း မေလးရှား စကင်္ာပူ တရုတ် ဂျပန် ကိုရီးယား အိနိ္ဒယ အေမရိကန် အြခား ဇနီး/ခင်ပွန်း သား/သမီး သားမက်/ေချွးမ ေြမး မိဘ/ေယာက္ခမ ေမာင်နှမ အဘိုး/အဘွား အြခားေဆွမိျုး ေမွးစားသားသမီး ေဆွမျိုးမေတာ်စပ်သူ ©DRSDataServicesLimited/O03150813/YSGH